Kulan ay yeesheen Taageerayaasha madaxweyne Farmaajo oo Dood badan dhaliyay . – SOMALI RADIO ONAIR
Kulan ay yeesheen Taageerayaasha madaxweyne Farmaajo oo Dood badan dhaliyay .
January 9, 2022 nuxur wararka Uncategorized 0
Ingiriis cu qornaa oo muddo saacado ah ku jiray bogga Twitter-ka ee Wasaaradda Caafimaadka ee Soomaaliya ay ugu talo gashay wararka xanuunka Covid-19 ayaa lagu sheegay in dadka baraha bulshada ku taageero Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay khatar badan yihiin fayraska Karoona.
Maxaa looga hadlayaa shirka Golaha watashiga qaran ee Maanta Muqdisho ka Furmaya ?
Faah Faahino ka soo baxaya dagaal ka dhacay degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud